April Queen –3Mp3 Album Myanmar Online Mp3 | Myanmar Online Mp3
Home » Pop » April Queen –3Mp3 Album	April Queen –3Mp3 Album	February 10, 2012 by MMp3	3 Comments
Myanmar Mp3 Album – April Queen –3Mp3 Album – Myanmar Female Singer combination Album April Queen or April Ekari free online mp3 album is available to listen on Myanmar Mp3 Album. All songs are composed by Myanmar famous composer Soe Lyin.
ကြားလားကြားလား – အေသင်ချိုဆွေ, တော်ပါ တော်ပါ – အိမ့်ချစ် ၊ ဟဲလေး, အရင်ရည်းစားကိုမေ့ပြီပေါ့ – ချမ်းချမ်း, မြင်တိုင်းမကြည့်နဲ့ – Jenny ၊ D ယံ, ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး သိလား – သဇင်, ဆေးဆေးလေးပဲ – ချစ်စနိုးဦး ၊ သြရသ, ချစ်လိုက်မယ်ရှင် – ရှင်းရှင်း, ဘာလုပ်ကြမလဲ – မို့မို့ဇော်ဝင်း ၊ ဆူးဆူးဇော်ဝင်း ၊ ဘရိတ်ကီ, အအေးမပတ်ပါဘူး – ချောရတနာ ၊ သန္တာဗို, အရူးမထနဲ့ဟေ့ – A နွန် ၊ ဇမ်နူး, ကျုံးဘေးနားမှာ – မဉ္ဇူကိုကို, ခင်ဦးမလား – Jue ၊ သံစဉ်လင်း ၊ ဒီရေတိုး, နေပါစေ … နေပါစေတော့ – နန်းဆုရတီစိုး ၊ ဆုပန်ထွာ ၊ ဂူဂူး, ဒါပဲ ဒီလောက်ပဲ – ဆူဇီ ၊ Wai လျှံ
April Queen, Myanmar Pop Music, Thingyan Song	Latest Albums/Songs	Nor Naw – Sayar Kyi Nae Thu Ei Ta Paeh Myar
3 Responses to "April Queen –3Mp3 Album"	Comments are closed.
Top Albums	Myo Gyi - Min Shi Tae Myo Mp3 Free Download	ဝေလ - 1982 Album	ဝေလ – မိတ်ကပ်မကြိုက်သောသီချင်းများ Album	Myo Gyi - Change Album	Ah Nge: Zit Myit ဇစ်မြစ် Mp3 Album	Myo Gyi - Lay Pyay Mp3 Album	Zaw Win Htut - Luu Mp3 Album	Myanmar Music	Myanmar Music